Ameerikaa: Walitti bu'insa Oromiyaa fi Somaalee jidduurratti qorannoon gaggeeffamuu qaba - BBC News Afaan Oromoo
Ameerikaa: Walitti bu'insa Oromiyaa fi Somaalee jidduurratti qorannoon gaggeeffamuu qaba
Madda suuraa, US Embassy
''Keessattuu oduun naannoo Harargee keessaa dhagahaa jirru baay'ee nu jeeqeera'' Embaasii Ameerikaa Finfinnee
Embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru, waa'ee dararama daangaa Oromiyaa fi Somaalee gidduu irratti ibsa cimaa qorannoon akka gaggeeffamu gaafatu baase.
'Walitti bu'insi uummataafi buqqaafamuun namoota hedduu daangaa naannolee Oromiyaa fi Somaalee, keessattuu oduun naannoo Harargee keessaa dhagahamaa jirru baay'ee nu jeeqeera'' jechuun eegala ibsichi.
Embaasichi qorannoon akka gaggeeffamus gaafata.
''Mootummaan Itiyoophiyaa dhimma kana haala ifa ta'een qorachuun, qaama balleesse seeratti akka dhiyeessu gaafanna. Haaluma walfakkaatuun, hawaasni naannoolee walitti bu'insi kun uumame jiraatan, dhimmichaaf fala akka barbaadaniif deeggarsaa fi jajjabinni isaan barbaachisa.''
Muummichi Ministeeraa Itiyoophiyaa Obboo Haayilemaariyaam Dassaalany gaafa Dilbataa, mootummaan isaanii eenyuyyuu haa ta'an, namoota balaa kanaaf sababa tahan karaa seera qabeessaan seeratti dhiheessina jechuun isaanii ni yaadatama.
Hanga ammaatti akka hubannetti, jeequmsa gaaf tokko uumame qofaan lubbuun namootaa 18 darbuusaa dubbi himaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa ibsaniiru. Haatahu malee, gabaasonni garagaraa namoonni du'an lakkoofsi isaanii kanarra caaluu akka danda'uu ennaa eeran, namoonni kuma 55 ol tahan ammo qe'ee isaanirraa buqqaafamanii jiru.
Ibsi Embaasii Ameerikaa dabalataan, mareen siyaasaas akka taasifamu barbaada.
''Itiyoophiyaan biyya cimtuu, badhaateefi dimookraatawaa kan taatu, maree siyaasaa ifa ta'eefi hunda hammate gaggeessuu yoo dandeessedha jennee amanna. Kana malees, hojimaata mootummaa ifa ta'eefi jaarmiyaalee haqaafi demookraasii ishee cimsuus yoo dandeessedha.''
Ibsichi kan xumuru, 'Ta'iiwwan dhihootti ta'aa jiran kunniin, dhimmoota eeraman irratti jijjiiramni ariifachiisaa fi qabatamaa caalmaatti akka barbaachisu kan ibsanidha.''
Namoonni kuma 55 ol tahan qe'ee isaanirraa buqqaafamaniiru
Ulamoonni Somaalee seera ijoollee durbaa kittaanuu dhorku baasuuf